Designs – အဆိုပါ Tailoress
မတ်လ 15, 2018 | အထူးပြောစရာမရှိ | Designs
အောက်တိုဘာလ 25, 2017 | အထူးပြောစရာမရှိ | Designs
ဇူလိုင်လ 23, 2017 | အထူးပြောစရာမရှိ | Designs
I’ve been working onafew projects this month, one is this jumpsuit pattern. I’ve never owned one but always fancied one as they look so practical and comfy as well as stylish! I have not been disappointed so far, I am wearing it as I type and must say it feels pretty good! ငါ […]
June 27, 2017 | အထူးပြောစရာမရှိ | Designs
မေ 12, 2017 | အထူးပြောစရာမရှိ | Designs
ဇန္နဝါရီလ 20, 2017 | အထူးပြောစရာမရှိ | Designs, ပုံစံများ
စက်တင်ဘာ 1, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | Designs, ပုံစံများ
သြဂုတ်လ 31, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | Designs, ပုံစံများ
သြဂုတ်လ 30, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | Designs, ပုံစံများ, Project Ideas
သြဂုတ်လ 26, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | Designs, ပုံစံများ